June 2009 edited March 2010 in Laptops & Notebooks Sale
Paytayu wrote: »
MSI net book (wind U 100) လေးမဆိုးဘူးဗျ..... 450000 လောက်ပဲရှိတယ်... အကြံပေးတာပါ... ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ရတာလဲမလေးဘူး နဲနဲတော့သေးတယ်:D:D:D
Netbook လောက်ပဲရမယ်ထင်တယ်... MSI Wind တော့ရမယ်.. ၄ ခွဲလောက်တော့ရှိတယ်... accer လည်းရှိတယ်.. ဘယ်လောက်လဲတော့ သေချာမသိတော့ဘူး.... သူကတော့ ၅ နားကပ်မယ်နဲ့တူတယ်.. ဒါမှမဟုတ် ၅ နဲနဲစွန်းမယ်.. Netbook လောက်ပဲ ၄ သိန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရမှာပါ... Dual Core တွေကိုတော့ ၆ သိန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရပါတယ်.. Used ထဲကဆိုရင်တော့ Core2Duo ကိုတောင် ၅ သိန်း ဝန်းကျင်နဲ့ရနိုင်တယ်။ Laptop Used တွေကို ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းက ချမ်းမြေ့မှာ သွားကြည့်လို့ရတယ်။ :6:
ဟိုနေ့က acer ပြခန်းမှာတွေ့ခဲ့တာ5သိန်း3သောငး်တဲ့။
Core2duo, 160GB , memory က 1 GB.:)
5 သိန်း3သောင်းနဲ့ Core2ရတယ် ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ model no လေး သိရရင် ကောင်းမယ်။
ဟုတ်လို့လား.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်တုန်းကသွားသေးတယ်.. မရှိဘူးဗျ.... Core2ဆိုရင် ၇ သိန်းကျော်မယ်တဲ့.. ကျွန်တော် show room မှာပဲ သွားမေးခဲ့တာပါ..
ASUS Eee PC ဆိုရင် ကော.. ဘယ်လောက် မှ ရှိဘူး ..
ဟုတ်ကဲ့ ၀ယ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုမေးပေးမယ် ......................:)
၅သိန်းလောက် နဲ ့ဘာအမျိုးအစားတွေ ရနိုင်လဲမသိဘူးနော်...
သိရင် အမျိုးအစားနဲ ့အသေးစိတ်လေးတွေ ပြောပြပေးပါလား.... :d :d :d
နို၀င်ဘာ မှာ Windows Seven ထွက်မှာဆိုတော့ အဲအချိန်ကျရင် စျေးကွက်သဘောအရ Computer, Laptops တွေစျေးထပ်ကျဦးမှာပါ။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာလဲ ICT ပြပွဲရှိလောက်ပြီ။
၅သိန်း၊ ၆သိန်းလောက်နဲ့ ကောင်းကောင်း၀ယ်လို့ရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အခုပဲလိုနေတာဆိုရင်တော့လဲ တစ်မျိုးပေါ့နော် ... ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခုပဲအကြံပေးချင်တယ် ... Second Hand တွေကိုတော့ မ၀ယ်စေချင်ဘူး။
လောကမှာ မသုံးသင့်ဆုံး Second Hand တွေက ... Electronic Things တွေနဲ့ .... ရည်းစား နဲ့ပဲဗျ ........
( စိတ်နာနာနဲ့ ပြောပစ်လိုက်ပီ ... ဟီးးးးးး :P )
ကျွန်တော် က ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်မှ လိုချင်တာဗျ... အကိုရ...
တစ်ဆိုင်၀င်တစ်ဆိုင်ထွက် လိုက်မေးရတာ ရှက်စရာ ကြီး ...
Laptop wpfvHk;avmuf0,fzdkU a&G;cs,f&rSm tMuyf&dkufaevdkU 'DrSmvmNyD;wdkifyifwmyg wpfcku HP Pavilion dv2-1123ax Entertainment Notebook PC (VH121PA)
aemufwpfcku Compaq Presario CQ41-205TU Notebook PC (WH978PA)
ကျနော် compaq udka&G;&if
processor :IntelВ® Coreв„ў i3-330M processor
вЂў 2.13 GHz,3MB L2 Cache, 1066 MHz FSB &r,f aps;u jrefrmaiG 598600
tJ usaemfu HP av;udkoabmuswmAs ol&JU
processor : AMD Athlonв„ў Neo X2 Dual-Core Processor for Ultrathin Notebooks L335
вЂў 1.60 GHz, 512 KB L2 Cache, Up to 1600 MT/s system bus running at AC/DC mode 18 watt wJh aps;u jrefrmaiGeJU 700800 As aps;BuD;ayr,fh Processor u Compaq xufawmhedrfhaerSmyJ qdkawmh
'D AMD Dthlon Neo X2 Dual-core qdkwmu IntelВ® Coreв„ў2 Duo Processor T6600 avmufawmhjrefEdkifrvm; qdkwm&,f b,f[mudk0,foifhw,fqdkwmav; odoavmuf ajzMum;ay;apvdkygw,f
'D AMD Dthlon Neo X2 Dual-core qdkwmu IntelВ® Core™2 Duo Processor T6600 avmufawmhjrefEdkifrvm; qdkwm&,f b,f[mudk0,foifhw,fqdkwmav; odoavmuf ajzMum;ay;apvdkygw,f
မမြန်နိုင်ဘူးထင်တယ်။L2 cache ကိုဘဲကြည့်လေ 512KB ဆိုတော့။ ကျနော်ကတော့ compaq ကိုအားပေးပါတယ်။